तिथि मेरो पत्रु » तपाईंको सपनाहरू को नारी आकर्षित गर्न कसरी
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 28 2020 |5मिनेट पढ्न
म एक महिला हुँ, मानिसहरूसँग धेरै मितिहरूमा गएका एक महिला, फिर्ता मेरो डेटिङ दिन मा. त्यसैले म विभिन्न व्यवहार को एक धेरै हेर्न मिल्यो, विचार र डेटिङ गर्न आउँछ. म तपाईं संग साँच्चै मानिसहरू महिलाहरु डेटिंग लागि के काम गर्दछ बारेमा भित्र स्कूप साझेदारी गर्न जाँदैछु, तपाईं एक तिथि मा बाहिर छन् वा एक महिला सञ्चार गर्दा र पनि विपत्ति जस्तै के जोगिन.
के तपाईं यी आकर्षण बिल्डर्स पक्का बानी बसाल्नुपर्छ
रोमान्स उनको – हामी महिला जोडिएको महसुस माध्यम एक मानिस आकर्षित हुन, यो कुरा म विश्वास अधिकांश पुरुषहरु लागि काम गर्दछ कसरी देखि एक सानो विभिन्न छ. त्यसैले हामी एक मानिस पूरा गर्न सक्छन् र सबै आकर्षित महसुस, तथापि उहाँसँग समय खर्च पछि उहाँले हामीलाई जित्न सक्छ र हामी सम्पूर्ण रूपमा उहाँसँग लागि गिर. यो सबै समय हुन्छ. त्यसैले यो प्रयोग. रोमान्स उनको. जमानाको पुरानो स्पष्ट चिन्ता नगर्नुहोस् – म एउटा मानिस उनको संग रोमान्टिक हुन वास्ता जब अचम्मको महसुस छैन अविवाहित महिला को थाहा छैन. त्यो तपाईं जाने प्रयास नोटिस हुनेछ, फूल, उनको कुर्सी फिर्ता खींच, यति ढोका र रही. उनको टाउको मा त्यो विश्वास तापनि यो जमानाको पुरानो हुन, उनको मन मा त्यो सिर्फ गल्नेछ, तपाईं असर गर्न लागि यो महत्त्वपूर्ण छ र त्यो छ जहाँ!
तिर्न प्रस्ताव - यो साँच्चै माथि संग सम्बन्ध. म सुझाव जो पनि तपाईं तिर्ने सन्दर्भमा छ फांसी-अप तपाईं छोड र तपाईं एउटा राम्रो छाप पार्न चाहनुहुन्छ भने बिल खुट्टा. थाहा चाहनुहुन्छ किन? एक पहिलो तारीख मा दिनुपर्छ भएका मेरो लेख पढ्नुहोस्.
उनको बधाई (तर पनि धेरै छैन) - एउटा सानो, साँचो प्रशंसा एक महिला राम्रो महसुस बनाउन को लागि एक धेरै लामो बाटो जान्छ, र पनि coldest हृदय पग्लन सक्छ. यो गरेर मा-तर सावधान. आफ्नो मुखबाट हरेक अन्य शब्द एक तारीफ छ भने तपाईं असुरक्षित रूपमा भर आउन सक्छ.
बरफ तोड्न मजा प्रयोग - डेटिङ तपाईं उसलाई यति र मजा मा केहि हात योजना गरेर बरफ तोड्न चिन्नुको छन् whilst झमेला अनुभव हुन सक्छ, बरु अधिक काम साक्षात्कार जस्तै बाहिर बारी गर्न सक्ने तनाव भरिएको बार मिति या खाने भन्दा! यहाँ जानुहोस्: केही महान विचार र यहाँ पढ्न को लागि अद्वितीय डेटिङ विचार: जडान कसरी बनाउने पत्ता लगाउन एक पहिलो अचम्मको मिति योजना.
तनाव निर्माण - तनाव भवन र यौन वृद्धि प्रयास र लामो तिनीहरूले जस्तै एक महिला संग आकर्षण वृद्धि गर्न मानिसहरूले प्रयोग गरिएको छ कि प्रविधी जाँच. यो तपाईं एक सेक्स किरा बन्न मतलब छैन, मजा तथापि एक बिट, चंचल प्रेमलीला गर्न सक्छन् साँच्चै तातो कुराहरु. यो overdone छैन रूपमा Teasing रूपमा लामो कामुकता निर्माण गर्न अर्को ठूलो तरिका हो. म एक महिला अन्तरक्रिया आफ्नो मुख्य बाटो रूपमा यो प्रयोग गर्ने एक मान्छे दिनांक. सुरुमा यो मजा थियो, तर एक घण्टा वा दुई पछि यो थकान स्पष्ट थियो. साथै, तनाव भवन को भाग आफ्नो जीवन र स्वतन्त्रता कायम छ, तपाईं एक महिलालाई पतन पनि जब.
यी डेटिंग गल्तिहरु जोगिने
Whiney हुनु - कुराहरूबारे औधी right.Don टी कराहना गर्ने मानिसहरू बन्द यस्तो मोड हो. गम्भीरतासाथ. म तपाईं सबै समय moans जो ठेगाना भने तपाईं बताउन सक्नुहुन्छ यकीन. तपाईं कि तपाईं होइन सोच्न सक्छन्, तथापि, बस भनेर मा जाँच. कहिलेकाहीं हामी लज्जित र पनि यसलाई साकार बिना right.Don टी कराहना. तपाईं आफ्नो जोडीसित गुनासो मनपर्छ? तपाईं बारेमा लज्जित गर्नुहुन्छ: मौसम, आफ्नो काम, अर्थतन्त्रको राज्य, महिला तपाईं मिति? तपाईं आफ्नो साथीहरूसँग यो भने तपाईं डेटिङ गर्दै गर्दा संभावना तिमी यो हो, र यो गम्भीर एक महिला पन्छाउन सक्छ. तपाईं आफ्नो तिथिहरु मा के कुरा गर्दै छन् सजग बनें, र भाषा तपाईं उपयोग गर्दै.
प्रमुख असुरक्षा देखाउँदै - ठीक त हामी सबै केही असुरक्षित महसुस छ, र म भावना माथि Bottling लागि छैन हुँ, तथापि एक पहिलो तारीख तपाईं विपरीत सेक्स गर्न आकर्षक छन् विषयमा आफ्नो असुरक्षा गुनासो गर्न ठाँउ छैन, म तपाईंलाई आश्वस्त किनभने त्यसो भने तपाईं हुनेछैन भनी! करीब महिला यो मनमोहक तथापि कि एक गम्भीर अल्पसंख्यक हुनेछ पाउन सक्छ. सबै भन्दा महिलाहरु को लागि यस हामीलाई चिसो चलिरहेको हुनेछ. म एक पल्ट म त्यो पहिलो तारीख मा आकर्षक लाग्यो कि मलाई सोधेर सुरु गर्ने मान्छे दिनांक, र उहाँले मलाई देखाए गर्नुभयो बाटो यो असुरक्षा को एक ठाउँबाट आउँदै थियो. उहाँले यो ड्रप थिएन. उहाँले मलाई सोधेर राखिएको, म उसलाई आकर्षक पाउनुभयो? त्यसपछि म उसलाई आकर्षक देखेनन् भने कुनै बुँदा डेटिङ थियो भन्दै सुरु र उसले त्यसबारे एकदम हास्यास्पद मिल्यो. म कस्तो महसुस सत्य म अझै पनि मेरो मन बनाउन थियो (आकर्षण हामीलाई महिलाहरु लागि फरक फरक काम गर्दछ सम्झना) तथापि प्रत्येक समय संग त्यो मेरो आकर्षण तल गए उल्लेख. प्रभावकारी ढङ्गमा उहाँले अर्को मिति रही बाहिर आफूलाई कुरा. चिकित्सा मा आफ्नो विषयहरूमा बाहिर काम, वा आफैलाई घर मा, छैन आफ्नो तिथिहरु मा. यो पनि ध्यान दिनुहोस - असुरक्षित महसुस र भावना अलग हो!
आफ्नो पूर्व बारेमा bitching - मेरो लागि यो भन्दा खराब अपराधियों को एक छ र चकलेट गर्मी दिनमा पिघलने भन्दा यो छरितो एक राम्रो मान्छे मलाई पन्छाउन हुनेछ. ठीक, त्यसैले आफ्नो पूर्व सारा संसारमा सबै भन्दा ठूलो ख * tch हुन सक्छ, र तपाईं ल्याउन लागि पाँच जना छोराछोरी संग दिल भाँचिएको बाँया, तर तपाईं डेटिङ गर्दै स्त्रीको अझै तपाईं थाहा छैन. तपाईं खराब आफ्नो पूर्व अडकलहरु शुरू भने त्यो तपाईं भन्दा आफ्नो पूर्व अधिक बताउन हुनेछ. साथै त्यो तिमी उनको बारे मा बनाउन हुनेछ इन्साफ चिन्ता हुनेछ. डेटिङ मा पूर्व गरेको प्रारम्भिक माथि ल्याउने बस खराब फारम र पुरा तरिकाले अनावश्यक छ (वास्तवमा म आफ्नो सम्बन्ध मा पूर्व गरेको ल्याउन छैन लागि एक राम्रो मामला बनाउन कहिल्यै!) के महत्त्पूर्ण तिमी को हो छ अब, तपाईं अगाडि महिला संग.
प्रमुख फांसी अप राख्दा (यी हामीलाई रातो झण्डा जस्तै हेर्न!) - सबै माथि हेर्नुहोस्. रुको अप पनि तपाईं मा गरिएको छ भयानक मिति बारे ranting समावेश गर्न सक्नुहुन्छ, यो तपाईं असुरक्षित महसुस किनभने त्यो तपाईं भनिन्छ छैन भन्ने गनगन, तपाईं भएको छ सबै तिथिहरु बन्द slagging, आदि बिल तिर्ने सन्दर्भमा कराह. यो आफ्नो ठूलो केटा प्यान्ट राख्न समय हो. कहिलेकाहीं जीवन अन्याय देख्न सक्छौं, तपाईं अगाडी डेटिङ खेल मा प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने तर कहिलेकाहीं तपाईं बस यसलाई चूसना छ! अन्यथा तपाईं बस आफ्नो रस मा Stew हुनेछ. म त्यहाँ बाहिर प्राप्त गर्न छान्ने आशा, यो फांसी-अप ड्रप र बस मजा लागि डेटिङ आनन्द उठाउन, अप्रत्याशित, र कहिलेकाहीं पागल अनुभव यो हुन सक्छ.
अनि अन्त मा ...
सबै माथि बिर्सने र बस आफैलाई हुन! - हो म साँच्चै बस भन्न गरे. दिशानिर्देश को सूची सिक्ने र निम्न कहिलेकाहीं आफ्नो तिथिहरु मा तपाईं कडी र अप्राकृतिक बनाउन सक्छ. यो ठूलो छ, जबकि त्यसैले सल्लाह पढ्न र यो डुब्न अनुमति यो भन्दा Mull गर्न, यो सिद्ध रही चिन्ता छैन. एक दिशानिर्देश भन्दा एक निरपेक्ष गर्नैपर्छ सबै डेटिङ सल्लाह लिनुहोस्. आफैलाई लागि कुराहरू बाहिर प्रयास र सबै माथि सिर्फ आराम र रमाइलो सम्झना!